Chii chinorehwa neireza mureza weKamite kuonazve? - Afrikhepri Foundation
China, april 15, 2021
Flag of the kamite rebirth
Chii chinoreva mureza wekuberekwa kwekamite?
SKuzeya kwemavara emumure weKamite reissance mureza
Mavara matsvuku-madema-ruvara-ruvara anomiririra maserolekisi matatu anokosha muupenyu:
RED: L 'Chizenga ipuroteni ine basa rakanyanya kutakura oxygen mumuviri wemunhu. Hemoglobin inowanikwa kunyanya mukati memasero matsvuku eropa. Inogadzirisa dioxygen yemhepo yemapapu ipapo iyo hemoglobin ine mweya inotakurwa inoendeswa kune dzimwe nhengo dzese dzemuviri.
BLACK: La melanin (eumelanin uye pheomelanin) inoratidzika yeganda inokonzera kupenya kweganda uye neuromelanin iyo inonzi dark pigment inowanikwa muuropi neurons. Melanine ine basa reviri:
Pamwero weganda, melanin ine basa rekudzivirirwa kweguruvhe rinopesana nemirairo ye ultraviolet
Pakati, muzvinhu zvakaoma zveuropi, neuromelanin ine basa rinodzivirirwa neuroni.
Muganda, melanin inoita anti-oxidant chinzvimbo uye inononoka kukwegura (ganda risina kuunyana)
Muuropi, neuromelanin inoshanda semuchenesa kuburikidza nekubvisa masimbi akaremara.
VAKURU: The chlorophyll ndiyo huru assimilator pigment yemastoynthetic plants. Iyi pigment inobatanidzwa mufotosynthesis kuti itore simba remwenje uye ishandure simba iri kuita simba remakemikari. Photosynthesis inobvumira kuburitswa kwemamorekuru eoksijeni mumhepo.
YELLOW: Ndiro Zuva Re risina iro photosynthesis uye nekudaro hupenyu hwaisazovapo: Rinotipa simba re cosmic rinotipa simba.
FALCON: Rukodzi runomiririra zuva rinobuda, iro rinoratidzwa pamusoro waro. Iri zuva dhisiki rinomiririra murazvo, mwenje waRa. Iyo hawk inoratidza kukura kana kukunda kwave kuwanikwa kana kuda kuve. Horus akarwa nasekuru vake Seti, uye akarasikirwa neziso rake rekuruboshwe iro rakaporeswa nekuda kwaDjehuty-Thot: saka neruzivo uye neruzivo kuti tichakunda.
Mureza saka unomiririra tariro (girini) yekuziva (tsvuku) yevanhu vaKama (vatema) inozotungamira mukukunda kwekuberekwazve kweKamite (Yero).
Ruzivo rweAfrica - Mbog Bassong
General Nhoroondo ye Africa (Mavhidhiyo)
Guva reOsiris, Mwari wevakafa uye kumuka kwakawanikwa muEjipitori
Mhandara Yenyika - Hermès Trismégiste (PDF)